Soomaaliya > Translations > Parent Network of WNY
Dalada Waalidka ee of WNY
Maad ka walaacsan tahay koriinka iyo wax dhigashada ilmahaaga? Hadii aad walaac ka qabto socodka, hadalka, dabeecada, fahanka iyo wax dhigashada ilmahaaga, hadii ilmahaagu qabo xanuun ama aad uga shakisan tahay laxaad la’aan, waanu ku caawin karnaa!
Kaalmo Foolka fool ah oo Kabiir
support@parentnetworkwny.org Isniin-Jimce 9am - 4pm
Dalada Waaliska ee of WNY
Ula soo hadal kaalmo deg deg ah oo khabiir oo foolka fool ah:
Nidaamka Barnaamijka Waxbarashada Shakhsi ahaaneed (IEP)
Barnaamijyada iyo Adeegyada Sabiga
Su’aalaha Gaarka ah ee Waxbarashada
Nidaamka socdaalka, oo ay kamid tahay Laxaad la’aanta soo ifbaxaysa, Xanuunka Maskaxda, iyo kuwo kale
Xarunta, Dugsiga kadib, iyo hay’adaha kale ee bulshada (ee adeegyada laxaad la’aanta)
Laxaad la’aanta qaar
Turjumaan bilaa lacag ah ayaa u diyaar ah oo dadka door bidaya luuqad aan Ingiriisi ahayn
Dadka soo hadlaya ee doorbida inay ku hadlaan luuqad aan Ingiriisi ahay, Dalada Waalidka ee WNY oo kaashanaysa Language Line Solution waxay kuu diyaarisay luuqada aad doorbidayso inaad ku hadasho. Adeegani waxa uu bixiyaa turjumaada in kadaban 140 luuqadood.
Balanta dadka aan Ingiriisiga ku hadal
Si aad soo hadalkaaga u sii qabsato badan, iimeel u soo dir, support@parentnetworkwny.org, kadibna sheeg wakhtiga aad doorbisayso oo u dhaxeeya Isniin-Jimce, 9am – 4pm oo sheeg “luuqada aad doorbidayso”. Khabiirka taakulada oo loo turjumayo ayaa kula soo hadli doona. Halkan Riix si aad u doorato liiqada aad doorbidayso.
Tilmaamaha soo hadalka Qofka aan Ingiriisi ku hadal
·Call (716) 332-4175
·Taleefanka waxaa lagaga jabaawi doonaa Ingiriisi.
·Fadlan sheeg baahida “lagaa taakulaynayo” sheegna “Luuqada aad doorbisayso”.
·Khadka ayaa lagugu yara dayn doonaa ilaa inta lala xidhiidhayo turjumaankii kaa kaalmaynayay su’aashaada. Nidaamkani waxay uu qaadan doonaa wakhti yar e, fadlan khalka ku jir.
·Marka uu turjumaanku ku soo biro khadka, Khabiirka taakulada ee Dalada Waalidka ee WNY ayaa hagi doona sheekada, waxaanu ku siin doonaa tilmaamaha gaarka ah ama kaalmada aad u baahan tahay. Turjumaanka waxaa lagu tobobaray in uu ku celiyo oo kaliyah waxa la yidhaahdo, balse maaha mid bixinaya tilmaamo ama talo.
·Hadii aanu joogin khabiirka taakuladaayada Dadalda Waalidka ee WNY, fadlan fariin noo reeb ama iimeel noosoo dir aad noogu sheegeyso “baahidaada” iyo “luuqada aad doorbidayso”. Waxaad noo reebtaa taleefan lambarkaaga iyo wakhtiga aad doorbidayso in aanu kugu soo celino. Khabiirka taakulada oo uu weheliyo turjumaan ayaa kula soo hadli doona si uu kaaga caawiyo su’aalahaaad qabto. Halkan Riix su aad u doorato luuqada aad doorbidayso.
Dalada Waalidka ee WNY waa hay’ad mutadawacnimo ah oo waxna barta kaalmona u fidisa qoysaska ay shakhsiyaadku ka laxaadka la’yihiin (shalasho ilaa waayeelnimo) iyo khabiirada.
Dalada Waalidka ee WNY waxay bixisaa kaalmo, tobobar iyo taakulayn kooxeed oo foolka fool ah si ay qoysaska haysta shakhsiyaadka laxaadka la’ ay u fahmaan laxaad la’aantooda iyo inay tibaaxaan adeeyada nidaamka taakulo. Badi shaqaalaha iyo maamulka Dalada Waalidka ee WNY waa waalid haysta caruur laxaad la’, taas oo siisa khibrad laxaad leh oo shakhsi ahaaneed waalidiinta ay gaadho.
Badi Shaqaalada iyo maamulka Dalada Waalidka ee WNY waa waalid haysta caruur laxaad la’, kuwaas oo laga dheehdo khibrad shakhsi ahaaneed oo qotodheer iyo dareen ay la dareemayaan qoysaska ay la shaqeeyaan. Ilaa markii dib u hadaynta lagu sameeyay 2001, Dalada Waalidka ee WNY waxay u shaqaysay ilaa 10,000 oo qof sanadkii.
Cida Aanu U Shaqayno
Anakoo maanka ku hayna kaalinta khabiirada, daryeelayaasha iyo waalidku ka qaato kaalmada uu ilmaha laxaadka la’ u baahan yahay si uu guul uga gaadho nolosha, shaqaalaha Dalada Waalidka ee WNY waxay ku takhasuseen inay ku dhiiri galiyaan waalidka iyo xubnaha qoysku lasoo xidhiidhaan khabiirada iyo dadka u ololeeya caruurta. Sidoo kale Dalada Waalidku waxay u shaqeeya khabiiro kuwaas oo ay siiso fursado waxbarasho joogto ah, khayraad iyo adeega rifertada ah.
Tobobarada & Munaasabadaha
Dalada Waalidka ee WNY waxay bixisaa tobobaro si waalidka iyo khabiiradu si fiican ugu fahmi lahaayeen laxaad la’aanta caruurtooda iyo inay korodhsadaan aqoonta gaarka ah ee mawduuca.
Tobobaradu dhaamtood waa u bilaa lacag qoyska, khabiirada iyo adeeg bixiyayaasha shakhsiyaadka laxaadka la’. Hadii todobaad kahor ogaysiis laga soo bixiyo waxaa goobta laga heli karaa meel ilmaha lagu hao. Fadlan tan ama wixii kale ee la xidhiidha hawsha dalbo markaad is qoraysid.
Booqo boga Tobobarka iyo Munaasabadaha si aad taariikhda iyo saacada u ogaato.
Xogta iyo Khayraadka
Inaad la socoto waxbarashada ilmahaagu waxay muhiim u tahay inaad sugto in uu ilmahaagu helo taakulaynta uu u baahnaa ee uu kaga bixi lahaa dugsiga.
• Ilmahaagu waxa uu xaq u leeyahay waxbrasho dugsi shicib oo munaasab ah bilaa lacagna ah.
• Waxaad xaq u leeyahay inaad go’aan kasta oo ilmaha waxbrashadiisa laga qaadanayo aad qayb ka noqoto, taas oo ay kamid tahay nidaamka lagu ogaanayo in uu ilmahaagu u baahan yahay adeeg gaar ah.
• Waxaad in aad si fiican u dheehataa xuquuqda ilmahaaga. Xuquuqahan waxaa heef federal sugay Sharciga Waxbarashada Shakhsiga Laxaadka La’ (IDEA).
• Adigaa ilmahaaga si fiican u garanaya, markaa waa in kaalintaada heer kasta la qiraa.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Wacyi Galinta, Dajiso fact sheet.
Agabka Teknolojiyada kaalmada (AT) waa alaab, shay ama software, kaas oo ama lasoo tukaan laga soo iibiyay, dib u habayn lagu sameeyay, ama marxalada loo dhisay, kaas oo loo adeegsado in uu kordhiyo, uu sidiisa u sii wado, ama wanaajiyo awooda shaqo ee ardayga laxaadka la. AT waxaa loo yaqaan adeeg kasta oo si toos ah u kaalmeeya ardayga laxaadka la’ kaas oo la doortay, iibiyay ama la isticmaalay agab teknolojiyad kaalmo. Adeega AT waxaa ka mid ah baahida qiimaynta, isku xidhka baahida dabiib iyo adeegyo kale, doorashada iyo iibinta qalabka AT iyo tobobarka ardayga iyo/ama hadii ay ku munaasab tahay qoyska ardayga.
Waa maxay Autism?Autism waa marxalado dhawr ah oo isbiirsaday oo la xidhiidha kormaha maskaxda. Autism waxay xidhiidh la yeelan kartaa laxaad la’aanta garaadka, isku dubo ridka oo adkaada iyo caafimaad jidheed sida hurdada ama calool xanuun adkaada.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Autism, Dajiso fact sheet.
Dabeecadu waa dareeqooyinka aan uga jawaabno xaaladaha iyo/ama jawiyada kala duwan. Dhamaan dabeecaduhu waxay leeyihiin sabab caruurtuna dabeecad ayay ku sheegaan shayga. Waalid ahaan waxaan u dhabo gali karnaa dabeecada si aan u ogoaano siday wax u dhacayaan.
Fikirada fudud ee lagu caawin karo ilmaha leh dabeecada qalafsani waxaa kamid ah hagida waxku ool ah, khidada oo la badalo iyo wakhti nasasho ah oo la siiyo.
Baadu waa dabeecad lagu riixayo oo keenta khatar taas oo lagu cel celiyo. Ilmo kale ma caruur kale ayaa ilmaha kula kaca wax aan fiicnayn si joogto ah mudo dheer. Kuwaas oo ah waxbaayo ula kac ah oo lagu doonayo in lagaga xanaajiyo ama wax lagu yeelo oo ay ka mid tahay naanays u bixin, u khaakhaayiraad, laagis, feedhid, riixid, meel ku xidhid, iyo iwm. Maanta waxaa soo koroshay oo soo badatay mushkiladaha baada internetka.
Laxaad La’aanta Koriinka
Laxaad La’aanta Koriinka (DD) waa laxaad la’aan iman karta wakhti kamid ah laga bilaabo marka uu ilmuhu dhashay ilaa inta uu 22 da’diisu tahay. Laxaad la’aanta waxay noqontaa dhaw nooc. Laxaad La’aanta koriinku waxay keeni kartaa in aanu ilmuhu si fiican u korin, in ay caqabado jidh ah haystaan, ama ay ku adkaato in uu wax dhigto ama guud ahaanba uu u koro sida caruurta dhigiisa ah. Mararka qaar shakhsiga waxaa ku kulmi kara dhawr nooc oo laxaad la’aan ah.
Xafiiska New York ee Dadka qaba Laxaad La’aanta Korniinka (OPWDD) waxa uu ka masuul yahay isku dubo ridka adeega in ka badan 126,000 oo reer New York ah oo qaba laxaad la’aanta koriinka, kuwaas oo ay kamid yihiin dad qaba laxaad la’aan wax dhigashada ah, autism, cerebral palsy, epilepsy, familial dysautonomia iyo neurological impairment (dhaawac, qaab dhismeed khaldan, ama xanuunada la xidhiidha Nidaamka xarunta neerfaha).
Laxaad La’aanta gaarka ah
In kabadan hal bilyan oo ruux ayaa la nool nooc laxaad la’aan ah. Way cakirnaan kartaa xogta laxaad la’aanta kala duwan ee sabiga, caruurta, iyo dadka da’da yar. Waxaanu bixinaa xogta dhamayska tiran ee qaybaha laxaad la’aanta caruurta, oo ay kamid yihiin daahida koriinka, laxaad la’aanta waxbarashada iyo laxaad la’aanta. Inkastoo aanay ahayn tani shax lasoo bandhigayo, hadana waxaanu isku dayaynaa inaanu daah furno gaar kamid ah laxaad la’aanaha caamka ah.
Laxaad La’aanta Waxbarashada
Hadii ilmahaaga ay ku adkaato waxrashadu oo aanad garanaynina sababta, waxay dhici kartaa inay tahay laxaad la’aanta waxbarashada. Waxaa u dhigtaa heerka aad ilmaha uga fadhido in uu gaadho iyo heerka rasmiga ah ee uu gaadho karo. Taas oo mararka qaar loo yaqaan laxaad la’aanta qarsoon, laxaad la’aanta waxbrashadu waxay saamaysaa sida maskaxda qofku u shaqayso – sida ay xogta nidaamka u mariso sida akhriska, qorista iyo xisaabta.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Laxaad La’aanta Waxbarashada, Dajiso fact sheet.
Xanuunka maskaxdu waa xaalad caafimaad oo badali karta qofka fikirkiisa, dareenkiisa, jawigiisa, awooda marka dadka kale la barbar dhigo iyo hawl karkiisa maalinle. Qofka waxaa laga yaabaa in aanu la tacaali karin baahidiisa nololeed ee maalinle. Dhamaan da’aha, jinsiyadaha, diimana ama heerka dhaqaale way saamayn kartaa. Waxaa jira dhawr xanuun oo ah kamid yihiin murugada, walaaca, waswaaska (OCD), laba-cirifoodka iyo kuwo dhimirku qoonmay (PTSD). Waxaa muhiim ah inaad usoo jeedid calaamada ilmahaagu bixinayo in uu xaalad adag la tacaalayo. Si gaar ah isha ugu hay hadii ilmahaagu uu keeno nolol ka dhac ama uu badalo qaabkiisii nolosha iyo hawlihiisa.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Xanuunka Maskaxda, Dajiso fact sheet.
Xanuunada neerfayaashu waa xanuuno ku dhaca nidaamka neerfayaasha jidhka. Kuwaas oo keena khalkhal ku yimaada nidaamka, dheecaanada ama eleftiriiga maskaxda, laf dhabarta ama neefo kale oo calaamado badan leh. Hay’ada Caafimaadka Adduunku waxay ku qiyaastay sanadkii 2006 inay ilaa hal bilyan oo ruux dunida maanta qabaan xanuunada neefhaha kuwaas oo la ildaran(si toos ah ula il daran)
Ilmahaaga wax caqabal ahi ma ka maysataa wax dhigashada? Ilmahaagu dugsiga ma ku haysataa mushkilad ka baajinaysa in uu wax dhigto?Kala hadal macalinka ilmaha ama shaqaale kale oo dugsiga ah si uu u kaaga kaalmeeyo go’aanka in uu ilmuhu u baahan yahay taakulayn. Marka la isku dayo dhamaan taakulaynta kala duwan ee fasalka ee lagu guul darayso, waa wakhtigii loo dhigo roganayay Waxbarashada Gaarka ah.
Maxaad samaynaysaa hadii uu ilmahaagu u baahan yahay taakulayn dheeraad ah si uu waxbarashada uga najaxo balse aanu u qalmin waxbarashada gaarka ah? Waxaad waydiisataa Qorshaha 504! Qorshahani waxa uu dhigayaa nidaam iyo adeegyo daruuri u ah in uu ilmahaagu sidii ugu munaasab sanayd wax u dhigto.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Waxbarashada Gaarka ah, DejisoSpecial Education, 504 Plan and IEP Developmentfact sheets.
Waxaa jira xaalado badan oo kala guur ah oo ardaydu marto oo ay mararka qaar adag tahay in la maareeyo ama inay dhax jibaaxaan.
Kala guurka yaraanta ee dugsiga kahor ( 3 jir)
Link to: http://www.kaleidahealth.org/childrens/services/display.asp?s=681
Kala guurka kahor dugsiga ilaa dugsiga (5 ji)
Kala guurka waayeelminada (14 jir)
Kala guurka waayeel nidamdu, waxa uu ka caawiyaa inuu ardaygu si fiican uga nolosha dugsiga uga gudbo nolosha ka dambaysa (sida nolosha, wax dhigashada, shaqada iyo ciyaarta). Shaqadani waxay ka caawinaysaa in uu ardaygu yeesho xirfad joogto ah waxbarasho (jaamacad), farsamo gacmeed (ganacsi), shaqaalayn (teegeero/diyaar gorow), adeega waayeelka (barnaamij), nolol madax banaan iyo ka qayb gal hawlaha bulshada. Hawshani waxay ku saabsan tahay mustaqbalkaas la sheegey hadafka ardayga waxaa kamid ah: dookhiisa, wax uu jecel yahay, neceb yahay, awoodiisa iyo barashada xirfadaha aasaasiga ah ee looga baahan yahay in la gaadho hadafkaas.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Kala Guurka, Dajiso fact sheet	1-on-1 Support, Call (716) 332-4175 Contact Us